တရားတန်ဖိုး(အပိုင်း၂) — Steemkr
ကျွန်တော်တို့လူဘဝသက်တမ်းတလျောက်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ကတော့ သေခါနီးအချိန်ပါပဲ။ အသက်ထွက်ခါနီးဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဘဝကူးကြရတာပါ။ ဒီစိတ်ကောင်းဖို့ဆိုတာ အသက်ရှင်စဉ် ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစိတ်ထားဖြူစင်မှုတွေ အပေါ်မူတည်နေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက စိတ်ထားဖြူစင်မှုလည်းရှိတယ် ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းရှိတဲ့လူပဲ သေခါနီးပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ဒီအကြောင်းရာတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့တွေအရေးကြီးလိုက်နာရမည့် သတိပြုရမည့်အချက်တွေကို ဥပမာများနဲ့ ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ရဲ့မိသားစုထဲကဖြစ်ဖြစ် အခြားရပ်ဆွေရပ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် သေခါနီးအချိန်နဲ့ကြုံ လာပြီဆိုရင်အခုဆက်ရေးမည့်အချက်များကို အထူးသတိပြုလိုက်နာရပါမယ်။
တရားခွေအားဖွင့်ပေးထားရန်(သို့) ဝိပသနာ အလုပ်ပေး တရားအားဖွင့်ပေးထားရန် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်accedientဖြစ်တာတို့ ဦးနှောက်သွေးကြောပျက်တာတို့ နလုံးရောဂါကြောင့်ရုတ်တရက် သေဆုံးတာတို့ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့။ နာတာရှည်ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရပြီး နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ပေးနိုင်တာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့အထက်ပါအချက်(၃)ချက်ပါပဲ။
လူတစ်ယောက်ဝေဒနာတွေခံစားနေရပြီး အခြေနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရောက်လာပြီး လူနာနားဝိုင်းအုံကာ ဟိုပြောဒီပြော ပြောတတ်ကြတယ်။ အဲဒီဆူဆူညံညံ အသံတွေကြောင့် သေခါနီးအယူမှား အစွဲမှားတွေနဲ့သေတတ်ပါတယ်။ တရားရှုမှတ်ဘူးတဲ့သူတောင် ဒီလိုအဖြစ်ပျက်တွေ ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်တရားမရှုမှတ်ခဲ့သူဆိုရင်ပိုဆိုးပြီပေါ့။ ကျွန်တော်နာကြားဖူးတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ထဲက ဥပမာတစ်ခုကို ဖေါ်ပြချင်ပါတယ်။ တခါကရွာတစ်ရွာမှာ ဆရာတော်တစ်ပါးရှိပါတယ်။ ရွာဦးကျောင်းရဲ့ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာဆရာတော်ဟာ ဆွမ်းစားကျောင်းတစ်ကျောင်းကို ဆောက်လုပ်နေတဲ့အချိန်ပါ။ တစ်နေ့မှာ ဆရာတော်ဟာ ရောဂါဝေဒနာတစ်ခုကိုပြင်းထန်စွာခံစားရပြီး ပြန်လွန်တော်မူမည့်အချိန်ကိုရောက်လာတယ်ပေါ့။ တကာ တကာမတွေကလည်း ဆရာတော်အသဲအသန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီး လာကြည့်ကြတာပေါ့။ ဆရာတော်စုတည်စိတ်ကျခါနီးအချိန်လေးမှာပဲ တကာမတစ်ယောက်က" အမလေး ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ ဆရာတော်မရှိရင်ဒီကျောင်းကြီး
ဘယ်သူ ဆက်ဆောက်တော့မလဲဘုရား" လို့ထအော်လိုက်တဲ့အတွက် ဆရာတော်ဟာကျောင်းကိုစွဲပြီး ပြန်လွန်တော်မတဲ့အတွက် ပြိတ္တာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပမာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရဟန်းသိက္ခာနဲ့နေလာတဲ့ ဘုန်ကြီးတောင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ပုထုဇဉ်တွေအတွက်တော့ဆိုဘွယ်ရာမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ညီကိုမောင်နှစ်မတွေရဲ့ မိဘ အဖိုး အဖွားတွေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ဒီလိုအဖြစ်ပျက်တွေမဖြစ်ရအောင် အထက်မှာဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ အချက်(၃)ချက်ကို လိုက်နာကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။နောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ကုသိုလ်တစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ နာမည်ကအောင်ခန့်ပါ။တနေ့မှာအောင်ခန့်ရဲ့
မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ကိုသက်ဦးက သူရဲ့ညီမလေးဟာ လည်ချောင်းကင်စာဖြစ်ပြီး မခံမရပ်နိုင်အော်ဟစ်နေပါတယ်။ လူနာစောင့်နပ်စ်မလေးကလည်း မခံနိုင်တော့ပဲ မစောင့်နိုင်တော့မယ့်အခြေနေရောက်လာနေပါပြီ။ကင်စာဝေဒနာတွေထဲမှာ လည်ချောင်းကင်စာဟာ
အဲဒါကြောင့် ကိုသက်ဦးက အောင်ခန့်ကို အကူညီလာတောင်းပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်က တရားပတ်အတူဝင်ဖူးတာကြောင့်အောင်
ခန့်အနေနဲ့တရားအကြောင်းကို တစ်ဖက်လူနားဝင်အောင်ပြောတတ်သူတစ်ယောက်အဖြစ်သိရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အကူညီလာတောင်းခြင်းပါ။ ကိုသက်ဦးကတော့ တရားပတ်ဝင်ခဲ့သော်လည်း အောင်ခန့်လောက် တရားသဘောတွေ နားမလည်ခဲ့ဘူးလို့ သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တရားနားလည်မှုဟာ မိမိရဲ့ သဒ္ဒါတရား ယုံကြည်မှု စိတ်ဝင်စားမှု ရှေးဘဝပါရမီဓာတ်ခံ စတဲ့အချက်ပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမတူနိုင်ပါဘူး။ အောင်ခန့် ကိုသက်ဦးတို့အိမ်ရောက်ပြီး ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ ကိုသက်ဦးညီမလေးကို တရားပြပုံအား နောက်Postမှာဆက်လက်ဖေါ်ပြသွားပါ့မယ်။
You gota60.02% Upvote and Resteem from @singing.beauty, as well as upvotes from our curation trail followers!
အာစိဏ္ဏကံ ဖြစ်‌‌အောင်‌ ‌လေ့ကျင့်‌ထားရမှာ‌ပေါ့‌နော်‌ အစ်‌ကို။
soeyan47 · 3년 전
ကံ ကံမနိမိတ်​ ကတိနိမိတ်​လာမာ်​​လေဆ၇ာဖ၇ယ်​ ကံမနိမိတ်​​ကောင်း၇င်​ ကံ​ကောငိးမယ်​ ကံ​ကောင်းရင်​ဂတိနိမိတ်​​ကောင်းမယ်​
သေခါနီးအချိန်ရောက်တဲ့အခါ အထူးသတိထားလိုက်နာရမည့် အချက် (၃)ချက်ကို မှတ်သားဖွယ်ရာတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်ပြီး ဥပမာလေးတွေနဲ့ပေါ်လွင်အောင် ရှင်းပြပေးထားတာ အားလုံးအတွက် ပိုပြီးမှတ်သားရလွယ်ကူစေပါတယ်ခင်ဗျာ
You gota1.64% upvote from @upmewhale courtesy of @mgmglattt!
This post has just received lots of ♡♡♡#LOVE♡♡♡ anda6.67% upvote from @haveaheart!
ကျွန်တော့ဘဝမှာ မခေါ်ပဲလာ မနှင်ပဲပြေးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆရာ
ညီမလေးကို ဘယ်လိုတရားပြမလဲ စောင်းနေပါ့မယ်ဗျာ 😊😊
yes i containue.
You gota15.38% upvote from @steembloggers courtesy of @mgmglattt!
yes sir i'm glad
You gota18.14% upvote from @votepower courtesy of @mgmglattt!
You gota12.07% upvote from @slimwhale courtesy of @mgmglattt!
You gota11.36% upvote from @proffit courtesy of @mgmglattt!
တရားပြပုံများကို ဆက်လက်မျှော်လင့်ကာ ဖတ်ရှုပါမယ်ဗျ
yes i carry on
သတိထားစရာအချက်လေးတွေကို ဗဟုသုတဖတ်ရလို့ကျေးဇူးပါ
တရားနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတရလို့ ကျေးဇူးပါနော်
I was summoned by @mgmglattt. I have done their bidding and now I will vanish...